रिमाजस्तो वौद्धिकता नारी अझै जन्मिन जरुरी ! – Next World Online
Next World Online > मनोरन्जन > रिमाजस्तो वौद्धिकता नारी अझै जन्मिन जरुरी !
रिमाजस्तो वौद्धिकता नारी अझै जन्मिन जरुरी !
काठमाडौं। पत्रकारिता छाडेपछि एक वर्षयता म खुबै अध्ययनशील भएको छु । अन्तरवार्ताहरु हेर्छु, पुस्तकहरु पढ्छु । साहित्य सिर्जनाहरु सुन्छु । पत्रकारितामा छँदा निर्लिप्त यतातिर लाग्ने फुर्सद थिएन । अहिले फुर्सदिलो छु।
कपील शर्माको कमेडी नाइट्स, मुन्द्रेको कमेडी क्लब, अच्युत घिमिरे बुलबुलको श्रुती सम्वेग, टीकाराम यात्रीको तमसोमा ज्योतिर्गमय लगायत कार्यक्रम नछुटाइ हेर्छु । विद्या चापागाईंको हेर्ने कथा पस्कने शैली असाध्यै मन पर्छ। डील्ली, पुण्य, मुकुन्देहरुका पछि कुद्ने युट्युवरहरुले हेर्ने कथाबाट केही सिकून्।
आज उल्लेख गर्न खोजेको विषय चाहिँ अलिक फरक छ। अन्तरवार्तामा आउने अतिथिअनुसार मात्र म ऋषि धमलाका ‘टक–सो’हरु हेर्ने गर्छु । ऋषि धमला मलाई मन पर्ने अन्तरवार्ताकार होइनन् । उनको प्रश्न सोध्ने ढंग र ढिपी देख्दै म दिक्क हुन्छु र टिभी बन्द गर्छु।
उनका कतिपय प्रश्नहरु सुन्दा उनी वर्षौं पुराना अन्तरवार्ताकार हुन् भन्न गाह्रो हुन्छ । पहिलो प्रश्नबाटै हमला गर्न त थाल्छन्, तर उत्तर दिनै पाउँदैन अतिथिले । धमला र्‍याखर्‍याख्ती पार्छन् । अतिथि अलमल्ल पर्छ । बोलौँ भने जवाफ टुङ्ग्याउनै पाइँदैन । नबोलौँ भने प्रश्नको वर्षा । तर, उनका कार्यक्रममा कोही अतिथि यस्ता पनि आउँछन्, जसका अगाडि धमला आफैँ कमजोर बन्छन्।
केही दिनअघि नायिका रिमा विश्वकर्मा ऋषिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा पुगिन् । मैले धन्न त्यो कार्यक्रम हेरेँछु । त्यस कार्यक्रमपछि पक्कै रिमाका हजारौँ ‘फ्यान’हरु थपिए । ती हजारौँभित्र म पनि एक परेँ।
हामीलाई थाहा छ अहिलेका अधिकांश सेलिब्रेटीहरु बोल्न जान्दैनन् । अभिनय गर्नु र गीतमा आवाज दिनु मात्र उनीहरुको संसार होइन । त्योबाहेक बाहिर पनि एउटा दुनियाँ छ । जहाँ उनीहरु जोडिनै पर्छ । उनीहरुका कैयौँ ‘फ्यान’ हुन्छन् । सर्वसाधारणले नियाल्छन् । मिडियाले हेरिरहेको हुन्छ । कोसँग कसरी बोल्ने, मिडिया कसरी फेस गर्ने भन्ने ज्ञान सेलिब्रेटीमा कम छ । परिपक्वतामा कमी, केटाकेटीपन बढी छ । त्यसैले त दीपाश्रीदेखि वर्षासम्म, आस्थादेखि दुर्गेशसम्म विवादमा आउँछन्।
तर, रिमा विश्वकर्माजस्ती क्षमतावान कलाकार पनि नेपालले जन्माएको रहेछ । रिमाले साह्रै मजाले धमलाका प्रश्नहरुको सामना गरिन् । मलगायत धेरैका नजरमा ती ‘प्रश्न’हरु प्रश्न नै थिएनन् । तर, रिमाले धमलाका हरेक वाक्यहरुलाई फिक्का सावित हुनेगरी गहकिला जवाफ दिइन् । हरेक ‘प्रश्न’को सुझबुझपूर्ण जवाफ दिइन् । कुनै बेला पनि उनी रिसाइनन्, दिक्क भइनन् । कतै पनि उनी अपरिपक्व देखिइनन्।
२७ मिनेटको अन्तरवार्तामा उनलाई धमलाले होइन, धमलालाई उनले बौद्धिक ढंगबाट हमला गरिरहिन् । धमलाका हल्काफुल्का जिज्ञासाहरुको ओजनिलो जवाफ दिइन् । रिमाको बौद्धिकताका अगाडि धमलाका ‘प्रश्न’हरु फिक्का भए । बौद्धिकस्तरका अन्तरवार्ताकारहरुले एकपटक रिमालाई बोलाएर एकघण्टा बहस् गरुन् । मलाई हेर्न मन छ । उनका पुस्ताका सेलिब्रेटीमा यति बौद्धिक सायदै कोही होलान्।
नायिका केकी अधिकारीकी मिल्ने साथी हुन्, रिमा । केकी–रिमाहरुले गत वर्षबाट कमेडी च्याम्पियन सञ्चालन गर्दैछन् । त्यसअघि रिमा नेपाल आइडलकी ‘होस्ट’ थिइन् । अभिनय, समाचार वाचन, कार्यक्रम सञ्चालन लगायत कैयौँ क्षेत्रमा रिमा अब्बल छिन् । इमान्दारिता र मिठो बोल्ने शैलीकै कारण उनले लाखौँ शुभचिन्तक पाएकी छिन् । उनी हरेक प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी ठान्दिनन् । तर, उनको जवाफ कहिल्यै कमजोर चाहिँ हुँदैन।
अति लोकप्रिय बन्दै गएकी अध्ययनशील नायिका रिमा काम गरेर कहिल्यै अघाउँदिनन् । कामलाई नै माया गर्छिन्। ऋषि धमलाकै अन्तरवार्ताको प्रशंगमा जाऔँ पुनः एकपटक । धमला रिमालाई विवाह, प्रेम र राजनीतिका प्रश्न गर्छन् । रिमालाई यी तीन कुरामै अहिले चासो छैन । राजनीति त झन उनको क्षेत्र नै होइन । तर, कुनै प्रश्नमा उनले कमजोर जवाफ भने दिइनन् । ‘राजनीति के कारण बिग्रियो ? प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, देउवा कस्को कारण राजनीति बिग्रियो ? तपाई कुन पार्टीमा जान चाहनुहुन्छ ? नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा या अरु कुनै ?’ एउटी नायिकासँग यस्ता प्रश्नमा धमला अल्झिरहन्छन् । जवाफ दिन दवाव दिन्छन् । यद्यपि, रिमाका हरेक जवाफ तर्कपूर्ण र सुन्दर छन्।
अन्तरवार्ताको तल गएर दर्शकका प्रतिक्रिया पनि पढेँ । अनि निकै सन्तुष्टी मिल्यो । अन्तरवार्ता हेर्नेहरुले रिमालाई चिनिसकेका थिए । उनको क्षमता देखिसकेका थिए । बौद्धिक नायिका मानिसकेका थिए । र, प्रश्नकर्तालाई थोरै गाली पनि गर्दैथिए । एउटा प्रतिक्रिया थियो, ‘यस्ता बौद्धिक पात्रहरुसँग अलि अध्ययन गरेर मात्र अन्तरवार्ता लिनुपर्छ । रिमा एक बौद्धिक नायिका हो।’
Previous Postसिन्दुर हालेपछि बिवाह रोकियो, बेहुला रिसाएर प्रहरीकै अगाडीवाट बेहुलीको बहिनी लिएर भागे
Next Postबेनिशालाई बिहेको दबाब